Ukuhlakazwa Factory - China Ukusabalalisa Abakhiqizi nabaphakeli
Imishini yokusabalalisa ye-Ultrasonic silica
I-Silica yinto eguquguqukayo ye-ceramic. Ine-insulation kagesi, ukuzinza okuphezulu kokushisa, nokuqina kokugqoka. Kungathuthukisa ukusebenza kwezinto ezahlukahlukene. Isibonelo: Ukungeza i-silica kokumbozayo kungathuthukisa kakhulu ukumelana nokuhuzuka kwengubo. I-Ultrasonic cavitation ikhiqiza amabhamuza amancane angenakubalwa. Lawa maqamuza amancane akha, akhule aqhume ngamabhendi wamagagasi amaningi. Le nqubo izokhiqiza ezinye izimo ezedlulele zasendaweni, njengamandla we-shear aqinile kanye ne-microjet. I ...
Isisetshenziswa se-Ultrasonic tattoo inks dispersion
Uyinki womdwebo wenziwe ngezingulube ezihlanganiswe nezithwali futhi zisetshenziselwa ama-tattoos. Uyinki we-tattoo ungasebenzisa imibala ehlukahlukene ye-inki ye-tattoo, angahlanjululwa noma ahlanganiswe ukukhiqiza eminye imibala. Ukuze uthole ukuboniswa okucacile kombala we-tattoo, kuyadingeka ukuthi uhlakaze i-pigment kuyinki ngokufanayo nangokuzinza. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kwezingulube kuyindlela ephumelelayo. I-Ultrasonic cavitation ikhiqiza amabhamuza amancane angenakubalwa. Lawa maqamuza amancane akha, akhule aqhume ngamabhendi wamagagasi amaningi. T ...
Imishini yokukhiqiza ye-Ultrasonic nanoemulsions
Ama-nanoemulsions (i-CBD emulsion kawoyela, i-Liposome emulsion) iya isetshenziswa kakhulu ezimbonini zezokwelapha nezokunakekelwa kwempilo. Isidingo esikhulu semakethe sikhuthaze ukuthuthukiswa kobuchwepheshe obukhiqiza kahle be-nanoemulsion. Ubuchwepheshe bokulungiselela i-ultrasonic nanoemulsion bukhombise ukuthi buyindlela engcono kakhulu okwamanje. I-Ultrasonic cavitation ikhiqiza amabhamuza amancane angenakubalwa. Lawa maqamuza amancane akha, akhule aqhume ngamabhendi wamagagasi amaningi. Le nqubo izokhiqiza ezinye izimo ezedlulele zasendaweni, ezinamandla ...
Izisetshenziswa Zokuhlakaza ze-Ultrasonic Graphene
Ngenxa yezinto ezibonakalayo ze-graphene, ezinjenge: amandla, ubulukhuni, impilo yensizakalo, njll. Eminyakeni yamuva nje, i-graphene isetshenziswe kakhulu. Ukuze ufake i-graphene ezintweni ezihlanganisiwe futhi udlale indima yayo, kufanele ihlakazeke kuma-nanosheets ngamanye. Ukuphakama kwezinga lokuchithwa kwamademoni, indima yegraphene isobala. Ukudlidliza kwe-Ultrasonic kunqoba amandla e-van der Waals ngamandla aphezulu okushefa izikhathi ezingama-20,000 ngomzuzwana, ngaleyo ndlela ...
Imishini yokusabalalisa i-Ultrasonic pigments
Izingulube zahlakazeka zaba ngopende, ukumbozwa, noyinki ukufaka umbala. Kepha iningi lezakhi zensimbi ezikwi-pigment, njenge: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 yizinto ezingancibiliki. Lokhu kudinga izindlela eziphumelelayo zokuhlakazeka ukubasabalalisa zisebenzise indlela ehambisanayo. Ubuchwepheshe bokuhlakazeka kwe-Ultrasonic njengamanje indlela engcono kakhulu yokusabalalisa. I-Ultrasonic cavitation ikhiqiza izindawo ezingenakubalwa zokucindezela okuphezulu naphansi kuketshezi. Lezi zindawo ezinengcindezi ephezulu niphansi ngokuqhubekayo iba nomthelela ngokuqinile ...